Dapr, loharanom-potoana malalaka misokatra izay manamora ny famoronana rindran-tany zanaky ny rahona | Avy amin'ny Linux
Dapr, loharanom-potoana malalaka misokatra izay manamora ny famoronana rindran-tany zanaky ny rahona
Darkcrizt | | Tambajotra / seriver
Vao namoaka ny kinova 1.0 i Microsoft ny rahona rahona antsoina hoe Distribution Application Runtime (Dapr).
Amin'ny tenin'i Microsoft, Dapr dia fe-potoana iray (ora famonoana) loharanom-baovao misokatra, azo entina ary atosiky ny hetsika de mamela ny mpamorona manangana rindran-damina mora tohina, microservices, tsy misy fanjakana ary fanjakana izay mihazakazaka ao anaty rahona ary amin'ny fotodrafitrasa Edge (toy ny Azure Stack Hub na AWS Outpost).
Momba an'i Darp
Miaraka amin'ity kinova miorina voalohany ity dia misy ny fampiharana Dapr izy ireo dia azo aparitaka amin'ny fotodrafitrasa fampiantranoana azy manokana na amin'ny vondrona Kubernetes amin'ny sehatry ny famokarana. Noho izany, Dapr dia mikendry ireo mpamorona hamorona rindranasa vaovao misy ny tany, ary koa ireo izay mifindra monina sy miasa amin'ireo rindranasa sy singa efa misy ao amin'ny maritrano zanatany rahona.
Ho tombony, Microsoft dia nitatitra fa ny fampiasana Dapr hanatsara tanteraka ny famokarana mpamorona amin'ny fampihenana ny fotoana azon'izy ireo ampiasaina amin'ny fampiroboroboana ny rindranasan'izy ireo.
Hahazoana fahatakarana tsara kokoa, ireo tompon'andraikitra amin'ny tetikasa dia manazava fa ny fotoana famonoana an'i Dapr hamela ny mpamorona hifantoka bebe kokoa amin'ny fanoratana lojika fandraharahana noho ny famahana olana ny rafitra nozaraina.
Ao amin'ity kinova 1.0 ity, ny ekipan'ny Dapr dia nitatitra fa nifantoka tamin'i Kubernetes izy ireo ho toy ny tontolon'ny fampiantranoana voalohany amin'ny fampandehanana ny fampiharana famokarana. Izy io dia tafiditra tanteraka ao anaty fiaramanidina fanaraha-maso Dapr sy ny maritrano Sidecar Dapr. Ohatra,
Manampy izany i Microsoft Dapr, izay manana singa maherin'ny 70 novolavolain'ny vondrom-piarahamonina, noho izany dia atolotra ho vahaolana amin'ny scenario marobe. Izany dia mahatonga an'i Dapr safidy manintona ho an'ireo mpamorona mitady hanangana rindrambaiko tsy miankina amin'ny rahona miaraka amina fivezivezena avo.
Nasongadinay fa ny Dapr dia tsy mifamatotra amin'ny sehatra manokana ary natao hampiasaina amin'ny fiteny fandaharana amin'ny alàlan'ny protokol HTTP sy gRPC. Ka tsy mahagaga raha afaka mandeha amin'ny Azure, AWS, Alibaba, ary Google cloud ny rindranasa Dapr.
Ny tontolo iainana Dapr dia ahitana teknolojia misokatra malalaka sy fampidirana manokana mifandraika amin'ireo mpamatsy rahonatoy ny stacks teknolojia mpiara-miasa. Na dia manome sanda fanampiny ho an'ny mpamorona mampiasa miaraka amin'ny Dapr aza ity endri-javatra ity, dia mety ho olana amin'ny fampisehoana ho an'ny fampiharana miorina amin'ny Dapr ihany koa.
Amin'io lafiny io dia manome toky i Microsoft amin'ny filazany fa ny Dapr dia ambany dia ambany ny tolotra serivisy an-serivisy ary nohamarinina ho an'ny tranga haingam-pandeha.
Amin'ny fanandramana, ny fotoana fanatanterahana dia manampy 1,2 m latency latency avy any amin'ny isan-jaton'ny 90 isan-jato ary eo amin'ny 2 ms ka hatramin'ny 99 isan-jato. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana, ny ekipan'ny Dapr dia nanoro hevitra ny hiaro amin'ny fanafihana ataon'ny olona eo afovoany, manana ny encryption nomen'ny Dapr tamin'ny alàlan'ny mari-pankasitrahana x.509 navoaka tamin'ny alàlan'ny serivisy fiaramanidina mifehy azy ary havaozina ho azy izany.
Niantehitra tamin'ny vondrom-piarahamonina loharanom-baovao misokatra 2019 an'ny mpandray anjara maherin'ny 114 hampivelatra ny Dapr i Microsoft.
Tamin'ny 2021, io isa io dia tafakatra 700, maneho ny fitomboany mihoatra ny enina mihoatra ny 16 volana, izay mampiseho ny fahalianana aterak'ity tetikasa ity eo amin'ny vondrom-piarahamonina mpamorona.
Amin'ny maha mpandray anjara an'i Dapr antsika dia manana fikambanana toa an'i Alibaba Cloud, HashiCorp, Microsoft, ZEISS, Ignition Group, ary koa ny isam-batan'olona.
Ary farany, satria tian'i Microsoft hisokatra, tsy hanavakavaka ary hiaraka i Dapr, nanambara ny orinasa fa eo am-panatontosana modely ho an'ny governemanta misokatra.
Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao momba an'i Darp, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Dapr, loharanom-potoana malalaka misokatra izay manamora ny famoronana rindran-tany zanaky ny rahona
Ny kinova IPFS 0.8.0 vaovao dia efa navotsotra ary tonga hanamora ny asa amin'ny pin
CodeCarbon, fitaovana loharano misokatra izay manara-maso ny fandotoana ateraky ny fikarohana milina